Iindaba -Qiniseka kwinjongo zakho, kwaye uqhubeke nokukhuthaza.
Intlanganiso yesishwankathelo sonyaka ka-Yu Rucheng wama-2021 yabanjwa ngembeko. Ngaphantsi kobunkokheli bomphathi jikelele uMnu Liu Jianjun, abantu abakumgangatho ophezulu kwisebe lezentengiso beza namaphupha abo, beshwankathela ukunqongophala komsebenzi kwisiqingatha sokuqala sonyaka, nokucwangcisa indlela yokufezekisa iinjongo kwisiqingatha sesibini sonyaka unyaka, kunye negalelo "kwikhaya" likaYu Rucheng, kwaye wenze iphupha lifezekise ngakumbi. Yenza isiseko sibe luhlaza ngakumbi.
Ekuqaleni kwentlanganiso, u-Li Sixian, umlawuli wesebe lentengiso lwasekhaya, kunye no-Yang Wen, umlawuli wesebe lezentengiso phesheya kwezilwandle, bashwankathela intsebenzo yomsebenzi kunye namava aqokelelweyo kwisiqingatha sokuqala sika-2021, kwaye bathumela ukugxila kunye nolwalathiso lomsebenzi isiqingatha sesibini sonyaka. Emva koko, abaphambili besebe lezentengiso nabo bathathe inqanaba lokushwankathela nokwenza ingxelo ngomsebenzi wabo.
Kholwa, uphume uphele, kwaye amandla aqinisekileyo ngamagama aphambili kule ntlanganiso yonyaka. Kwintlanganiso, someleze ukuzithemba kwethu ekufezekiseni iinjongo zethu ngeevidiyo ezimbini. Siwuqondile nomsebenzi obalulekileyo wokuba lilungu lesebe lentengiso likaYu Rucheng ngebali lezorhwebo kunye neenjongo zokuqala zomphathi jikelele uMnu Liu Jianjun.
Emva kwemini, ekuphenduleni imiba ekuxoxwe ngayo ngabantu abakumgangatho ophezulu wentengiso, umncedisi kumphathi jikelele ukhokele wonke umntu ukuba enze iqela elisebenza ngokudibeneyo kunye nokuzulazula kwitshathi yomsebenzi. Wonke umntu uqale ngokwahlulahlula ngokwamaqela ukuxoxa yedwa. Emva kwemijikelezo emine yengxoxo-mpikiswano kunye nothethathethwano, iziphumo zengxoxo edibeneyo yomntu wonke kunye nemvume zishwankathelwe kwisisombululo sengxaki. Kule nkqubo, wonke umntu wayezibandakanya, ehlala engqubana, ngamanye amaxesha exambulisana, ngamanye amaxesha enqwala, kwaye ekugqibeleni bafikelela kwisivumelwano, kwaye bekunye babenomtsalane wobulumko beqela kunye nokwenza indalo.
Ukuphela kwentlanganiso, uMnu. Liu uqukumbele intetho yakhe: Ndiyakholelwa ekubeni wonke umntu angabambelela kuxanduva lwakhe, afezekise intengiso, aqhubeke nokunyaniseka kwiinjongo zakhe zangaphambili, kwaye aqhubele phambili! ” Amagama, onke amagama kunye nezivakalisi zikhuthaza bonke abasebenzi abakhoyo. Siyakholelwa ngokuqinisekileyo ukuba ngo-2021 wonke, isebe lezentengiso laseYurucheng ngokuqinisekileyo liya kuzuza iziphumo ezingcono.